Ciidamo katirsan NISA la wareegey waddooyinka soo gala Villa Somalia farriina u diray madaxweyne Farmaajo.
September 16, 2020 Xuseen 1
Qaar kamid ah waddooyinka soo gala madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta waxaa saacado la wareegey ciidamo katirsan kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Ciidamadaan oo ku hubaysnaa qoryaha fudud iyo gaadiidka dagaalka tiradoodana ku sheegay 90 askari ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan mushahar la’aan soo foodsaartay saddexdii bilood ee ugu dambaysay.
Waxa ay hakad geliyeen isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyagoona ugu baaqay madaxda ugu saraysa dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada in la siiyo xuquuqda ay ka tabanayaan, maadaama ay kujireen goobo dagaal daryeel xumono soo food saartay.
Saraakiisha hoggaaminaysa ayaa sheegay in 1-dii bishii June ee sanadkaan la geeyey garoonka diyaaraadaha ee degmada Dayniile, ka dib markii ay tababar soo dhameysteen, hub iyo dareysna loo qaybiyay aysanna ilaa xilligaasi helin xuquuqdoodii ciidannimo.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay magaalada Muqdisho kulamo ku leeyihiin madaxda dowladda Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku shirsan aqalka madaxtooyada Villa Somalia.
Ha biciidsan kuwaan oo Farmaajo Villada ugu galay markii loo diro
Waa ifafaalo muuqdo,waana digniino iyo cabsi gelin ciidankan Madaxtooyada horteeda isbaarada dhiganayaa.
No muddo kororsi iyo soo laabasho xeeladaysan.